Tatuantes waa degel ka tirsan Actualidad Blog. Websaydhkeenu wuxuu u heellan yahay adduunka farshaxanka jirka, qaasatan taatikada laakiin sidoo kale daloolinta iyo qaabab kale. Waxaan soo jeedineynaa naqshadaha asalka ah inta aan dooneyno inaan bixinno dhammaan macluumaadka ku saabsan sida loo helo tattoos, daryeelka maqaarka, iwm.
Kooxda tifaftirka ee Tatuantes ayaa ka kooban xiisaynaya adduunka tatooyada iyo farshaxanka jirka ku faraxsanahay inaan kula wadaago khibradooda iyo aqoontooda. Haddii aad sidoo kale rabto inaad ka mid noqoto, ha ka waaban noogu soo qor foomkan.
Taageeraha qaabka neo-dhaqameed iyo naadiyada naadir ah iyo kuwa jilicsan, ma jiraan wax la mid ah gabal sheeko fiican ka dambeeya. Maaddaama aanan awoodin inaan sawiro wax ka dhib badan dolshaha usha, waa inaan u fadhiisto aqrinta, wax ka qorista iyaga ... iyo in la ii sameeyo dabcan. Kibir leh lix (habka toddobada) tattoos. Markii ugu horraysay ee aan sawiro, ma awoodin inaan eego. Markii iigu dambaysay, waxaan ku seexday dulinka.
Tan iyo markii aan yaraa, waan iska cadahay in arintaydu tahay inaan noqdo macalin, laakiin marka laga soo tago inaan awoodo inaan run ka dhigo, waxaa sidoo kale lagu dari karaa si qiiro leh hamigeyga kale: Wax ka qorida aduunka ee xatooyada iyo daloolinta. Sababtoo ah waa muujinta ugu dambeysa ee xambaarista xusuusta iyo daqiiqadaha ku noolaa maqaarka. Kii mid noqdaa, wuu ku celceliyaa oo waxaan ka idhi waaya aragnimo!
Sanado badan waxaan jeclaa aduunka tatooyada. Waxaan hayaa qaabab badan oo kala duwan. Caadiga caadiga ah, Maori, Jabaaniis, iwm ... Taasi waa sababta aan u rajeynayo inaad jeceshahay waxa aan ku sharaxayo mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Hooyo Tattooed, macalinka waxbarashada gaarka ah, cilmu-nafsiga iyo xiisaha qoraalka iyo isgaarsiinta. Waan jeclahay tattoos-ka oo kudarsashada jirkayga, waxaan jeclahay ogaanshaha iyo barashada waxbadan oo iyaga ah. Tattoo kasta wuxuu ka kooban yahay macno qarsoon waana sheeko shaqsiyadeed ... mudan in la ogaado.
Waxaan jeclahay gabi ahaanba wax kasta oo aan ku sameeyo tattoos. Noocyada iyo farsamooyinka kala duwan, taariikhdooda ... anigu waxan aad u jecelahay waxaas oo dhan, taasina waa wax muujinaya marka aan ka hadlayo ama wax ka qoro.
Waxaan ahay qof had iyo jeer jecel shucuurta. Wax ka ogaanshahooda, taariikhda, dhaqanka, iyo sida loo daryeelo waa hiwaayad aan jeclahay. Iyo waliba la wadaag aqoonteyda si aad ugu raaxeysato.
Waxaan ku dhashay magaalada Barcelona soddon iyo soddon sano ka hor, muddo dheer ugu filan qof dabiici ah oo xiiso leh oo xoogaa taxaddar la'aan ku raaxeysanaya barashada astaamaha iyo sida ay muhiimka ugu yihiin dhaqanka adduunka. Sidoo kale, waxaad horayba u ogayd in "halis la'aan madadaalo, xanuun aan faa'iido lahayn" ... Haddii aad rabto inaad wax walba ka ogaato taatikada, waxaan rajeynayaa inaad ka heshay qoraalladayda.
Hiwaayadayda aan jeclahay waa tattoos. Waqtigan xaadirka ah waxaan haystaa 4 (ku dhawaad ​​dhammaantood geeks!) Iyo qaabab kala duwan. Waxaan hubaa inaan sii kordhin doono qaddarka ilaa aan dhammaystiro fikradaha aan maanka ku hayo. Sidoo kale, waxaan jeclahay inaan ogaado asalka iyo macnaha tattoos.